DHAGEYSO: Madaxweynihii hore K/Galbeed Shariif Xasan ”Dalka 60 maalmood inuu R/wasaare la’aan ahaado weli kama dhicin” – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna guddoomiye ku-xigeenka Madasha Xisbiyada Qaran, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo galabta Shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ka hadaly arrimo badan oo xasaasi ah.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa Madaxweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in uu waddo qardo-jeex ah uu ku wado xaaladda dalka, islamarkaana ay ka dhacayaan dhacdooyin halis ah.
Wuxuu kaloo sheegay, in dalka uu muddo ku dhow 60 maalmood uusan laheyn ra’iisul Wasaare xilli wali uu shaqeynaayo baarlamaanka iyo Madaxtooyadda.
Shariif Xasan ayaa sidoo kale, uu baadil ku tilmaamay dhammaan talaabooyinkii ay qaaday xukuumadda KMG ah oo uu sheegay in ay baalmartay sharciga uuna socdo boob, sida uu yiri.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Shariif Xasan ayaa xusay, in nasiib darro weyn tahay in Madaxweynihii dalka oo laga rabay in uu dhowro dastuurka uu dhinac-marayo.
Ugu damebyn, Shariif Xasan ayaa madaxweynaha JF Soomaaliya, Farmaajo ugu baaqay in uu soo magacaabo ra’iisul wasaare, uuna ka shaqeeyo sidii doorasho waqtigiida ku dhacda loo heli lahaa.
Haddaba halka hoose ka dhageyso Shirka Jaraa’id Shariif Xasan:
Tags: dastuur ku tuntay, eedeeyay Farmaajo, Madaxweynihii hore Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan
RW hore ‘Kheyre’ iyo Guddoomiyihii hore BF Somaliya ‘Jawaari’ oo ku kulmay Muqdisho